कोरोना संक्रमण : मैले यसरी जितें – KhabarPurwanchal
कोरोना संक्रमण : मैले यसरी जितें
खबर पूर्वाञ्चल, १२ कार्तिक २०७७, बुधबार १९:०५
म धरान स्थित त्रिभुवन विश्व विद्यालय केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसमा प्राणिशास्त्र विषय अध्यापन गर्दछु । यहि २०७७ असोज २६ गते म धरानको विजयपुरमा थिए । साँझ चार बजे तिर मेरो शरीर एक्कासी रन्नक भएर तात्यो । आँखाको पछाडिको भाग अलि अलि दुखे जस्तो लाग्यो । बेलुकाको खाना रुचेन । त्यही राती पखाला लाग्ला जस्तो भयो । ज्वरो नापें समान्य नै थियो ।भोलिपल्ट २७ गते छोरीको जन्मदिन परेकाले म विराटनगर स्थित घरमा आएँ ।
कोरोनाको शंका लागेर माथिल्लो कोठामा छुट्टै बसे । भोलीपल्ट बिहान प्रयोगशालाकर्मी मित्र विनोद थापाले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशलामा मेरो पिसिआर परीक्षण गरिदिनु भयो । रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । तनाव भयो । दशंैको लागी किनेको खसी थाँती राखेर भोलिपल्ट झापाबाट आमा पनि मलाई स्याहार गर्न गुर्जो लिएर विराटनगर आउनु भयो । अब मेरो १४ दिने वनवास (होम आइसोलेसन) सुरु भयो । अब यसपालिको दशैं यही कोठामा बित्ने निश्चित थियो । त्यही साँझ ४ बजे अचानक १०२ डिग्री ज्वरो आयो । एउटा ५०० एमजीको सिटामोल खाए । तर ज्वरो घटेन । मेरो स्कूल पढ्दा देखिको मित्र डाक्टर उत्तरकुमार मैनाली,उहाँ अहिले कोशी अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँलाई मेरो पोजिटिभ रिपोर्टको बारेमा म्यासेज गरें । उहाँले मलाई तुरुन्त फोन गरेर मेरो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइ मलाई केही औषधीहरुको नाम टिपाई दिनु भयो । जसकाबारेमा म यहाँचर्चा गर्नेछु।
करीव पाँच वर्ष पहिले मलाई सुगर देखिएको थियो । अहिले थिएन । सुगरको औषधी खाएको थिइन । तर उच्च रक्तचाप (प्रेसर)को औषधी भने पाँच वर्ष देखि नियमित खाइरहेको छु । जटिलता थपिन्छकी भन्ने डर लागिरह्यो ।
घाँटी दुखेकाले डाक्टर मित्रको सल्लाह अनुसार सुरुका दिनमैे एजिथ्रोमाइसिन ५०० एमजी एन्टिवायोटिक दिनको एउटाका दरले पाँच दिनसम्म खाए ।
ग्यासट्राइटिस्(पेटमा ग्यास भरिने समस्या) का लागी ट्याब्लेट पेन्टव (पेन्टोप्राजोल) ४० एमजीदिनको एउटा तर मलाई अति नै पेटमा ग्यास भरिने समस्या भएका कारण ट्याब्लेट लुपिला (इलाप्राजोल) १० एमजी दिनको दुई पटक खानु पर्यो ।
ज्वरोको लागी ट्याब्लेट मेडोमोल (पारा सिटामोल्) ५०० एमजी को एक चक्की दिनको तीन पटक तर मलाई ज्वरो राम्रो नियन्त्रण नभएर दुई–दुई चक्की (१००० एमजी) आठ घण्टाको फरकमा तीन पटक सम्म खाए तर जिउ दुख्यो भन्दैमा आफु खुशी आइबु्रफेन (फ्लेक्सन) अथवा निमेसुलाईड(निम्स) जस्ता औषधी खानु हुँदैन् ।
शरीरको रोगसंग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन डाक्टरको सल्लाहमा मैले निम्न भिटामिनहरु सेवन गरें
भिटामिन सि (ट्याब्लेट स्कारभिट १०० एमजी ) एक चक्की दिनको एक पटक
भिटमिन बि कम्प्लेक्स (क्याप्सुल बिकोभिट्)एक चक्कीदिनको एक पटक
भिटामिन डी ( क्यप्सुल डिभी ६० के वा ट्याब्लेट भिटेरोल ६०,००० आइयु) एक चक्की हप्तामा एक पटक जम्मा दुई हप्ता
भिटामिन इ (क्यप्सुल एविअन ४०० एमजी) एक चक्कीदिनको एक पटक
लक्षण अनुसार औषधी ?
मैलेलक्षण अनुसार डाक्टरको सल्लाहमा निम्न औषधिहरु लिए
घाँटी खस्खस गर्दा ट्याब्लेट सेट्रीजिन १० एमजीवा लेभोसेट्रीजिन (ट्याब्लेट लेवोसेट ५ एमजी) राती सुत्ने बेलामा एक चक्की
खोकीलागेमा लेवोड्रोपोपिजाइन ८० एमजी (सिरप ड्रोपिटस १० एमएल ) दिनको तीन पटक
छातिमा ब्याक्टेरियाको संक्रमण हुन नदिन क्यप्सुल क्लैवम ६२५ एमजी एक एक चक्की दिनको तीन पटक र डक्सिसाइक्लिन (क्यप्सुल पेरीडक्स १०० एमजी) एक चक्कीदिनको दुइ पटक
पखाला लागेमा जिन्क ट्याब्लेट (जिटप २० डिटि) एक चक्की दिनको एक पटक वाजीवनजल(ओआरएस) मा घोलेर आवश्यकता अनुसार
पेट ढुस्स भएमा वा वाकवाकी लागेमा डम्पेरिडन (ट्याब्लेट डोमेल एमटी १० एमजी) एक–एक चक्की दिनको तीन पटक
अन्य सामग्री र उपकरण ?
घरमै (होम आइसोलेसन)मा बसेको बेलामा केहि मेडिकल उपकरणहरु किनेर घरमै राखीप्रयोगगर्न सकिन्छ ।
ज्वरो नाप्ने डिजिटल थर्ममिटर यसको प्रयोगले सजिलै ज्वरो आएको छ छैन, कति छ पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
अक्सिजनको मात्रा नाप्ने मेसिन (पल्स अक्सिमिटर)यसको प्रयोगल मुटुको धड्कन र अक्सिजन लेभल पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसको चिम्टामा चोर औंला छिराउने र नाप्ने सामन्य तया अक्सिजन स्याचुरेसन (एसपिओटु लेभल) ९६–९९ सम्महुने गर्दछ । ९२ भन्दा कम्ती भयो भने बिमारीलाई अक्सिजन को सपोर्ट चाहिने हुन्सक्छ । तर मलाई भने पेटमा गयास भरियो भने पनिअक्सिजन केहि समयकालागिकम्ती९० देखाउने गर्दथ्यो । अरु बेलाभने ९५–९६ देखाउने गर्दथ्यो ।
डिजिटल ग्लुकोमिटरयदी सुगरको बिरामी हुनुहुन्छ भने डिजिटल ग्लुकोमिटरको प्रयोगले रगतमा चिनिको मात्रा नाप्न सकिन्छ।
बाफलिने तरीका ?
उम्लिएको पानी भाडोमा खान्याँइ तौलियाले टाउको ढाकेर ५ देखि १० मिनटसम्म दिनको तीन देखि चार पटकसम्म सादा पानीको बाफ लिने तर पानीमा विक्स वा सन्चो आदी नहाल्ने बरु तुलसीको पात थोरै राख्न सकिन्छ अथवा वाफ लिने मेसिन भए थोरै नुन मिसाएमा राम्रोसँग वाफ आउने गर्दछ ।
खाना र फलफुल
खानामा प्रोटिनको मात्रा बढाउनु पर्दछ । जसको लागि भात वा रोटि, दाल, गेडागुडी, दुध्, अन्डा, माछा मासु, हरियो सागपात्, तरकारी, भिटामिन सी युक्तफलफुलहरु जस्तै कागती, अम्बा, अमला, केरा, जुनार्, स्याउ, अनार आदी नियमित रुपमा खाने गर्नु पर्दछ ।
मन तातो पानीमा नुन हालेर कुल्ला गर्द पनि घाँटी दुखेको सन्चो हुन्छ ।
प्रसस्त झोलिलो खाने कुरा च्याउको सुप्, मासुको सुप्, तरकारिको सुप्, मन तातो कागती पानी समय समयमा पिउनाले फाइदा गर्दछ ।
शुरुका दिनहरुमा मलाई खानामा पटक्कै रुची भएन आँखा चिम्लेर छिटो–छिटो चपाउँदै पानीले ठेल्दै निल्ने गर्दथें ।
हप्ता दिनजती पछी क्रमशःमलाई खानमा रुची बढ्न थाल्यो ।
स्वाद र गन्ध?
रिपोर्ट पोजिटिव आएको आठ दिन सम्ममलाई कुनै पनि कुराको गन्ध आएन, न त खानेकुराको स्वाद नै । साबुन्, स्यानिटाइजर जे सँुघे पनि केहि थाहा नहुने । बिस्तारै गन्ध त फर्कियो तर धेरै कडा रुपमा अथार्त साधारण साबुनबाट पनि नाक नै पोल्ने राग आउने भयो । आज १४ दिन पछी भने स्वाद र गन्ध पनि फर्किएको छ ।
मलाई पेटमा ग्यास जम्मा भएर शुरुका दिन मानिकै सतायो । मुखमा औंला हालेर उल्टी समेत गर्ने कोशीश गरें । पछी विहान बेलुका कारीव १५–२० मिनेट जती उफ्रिने, नाकबाट श्वास तान्दै छोड्दै गर्ने (अनुलोम विलोम), पेट भित्र हाल्दै छोड्दै गर्ने (कपालभाति) जस्ता योग (कसरत) गर्नाले मेरो ग्यासको समस्यानिकै कम भयो ।
आज १४ दिन पछी मेरो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । डाक्टरको सल्लाह अनुसार अझै एक हप्ता होम आइसोलेशन मै बस्ने छु । कोरोना लाग्दैमा नडराउँ, आत्म बल दरिलो बनाउँ, नियमित व्यायम गरांै, पोषिलो प्रोटिनयुक्त खाना खाउँ, तातो वेसार पानी खाउँ, कागती पानी , गुर्जो पानी, अदुवा, मरिच तुलसी जस्ता जडिबुटीयुक्त चियापिउँ,ं डाक्टरको सल्लाह अनुसार औषधी खाउँ, सकारात्मक सोचांै अक्सिजन लेवलजाँच गरांंैं । यती भए कोरोनालाई परास्तगर्न सकिन्छ ।
जानकारीको लागि धन्यवाद । सर त आफै Dr.जतिकै सिपालु । त्यसमा पनि Dr Mainali घनिष्ट मित्र।अनि सबै किसिमका Medicatin पनि। निमुखा , सर्वसाधारण, गरिब दुखी लाइ यो सबै आकाशको फल भयो नि
१९ कार्तिक २०७७, बुधबार १९:३२